पूर्व सोभियत संघ को क्षेत्र जो आफ्नो भागहरु को सबै राम्रो सडक निर्माण गर्न मौका पाएका थिए कि मतलब भूमि, को एक-छैटौं कब्जा। को Undeveloped expanses सुदूर उत्तर, taiga बाटाहरू, Tyumen को दलदली फाँटमा, बीचमा ब्यान्ड को अनन्त steppes - शरद ऋतु-जाडो अवधिमा दुर्गम बन्न सबै ठाउँमा। कुनै सडक, मात्र निर्देशनहरू छन्। परंपरागत, प्रयोग बीहड क्षेत्रको आन्दोलन वाहन वा विमान ट्र्याक।
सडक को कमी हटाउन सक्षम छ कि कुनै पनि प्रविधी रिमोट गाउँमा पूर्ण आकस्मिक चासो वसोवास लागि। तथापि, मोटर वाहन उद्योग तपाईं सानो आकार को सबै-भू-भाग वाहन, आर्थिक र पनि सस्तो आवश्यक विशेष गरी भने, प्रस्ताव सानो थियो। सिद्धांततः, यसलाई आयात किन्न सम्भव छ, तर यो शायद एक सरल villager यसलाई उठयो छ। आविष्कार र सही मिसिन नै निर्माण गर्न - - improvised मात्र तरिका हो। र सक्षमता र सबै उपलब्ध विवरण प्रयोग आधारित घर ATVs गरे। र हाम्रो मान्छे को कौशल को कमी कहिल्यै गुनासो गरेका छन्।
आविष्कार को इतिहास
क्रस-देश वाहन को सबै प्रकार को थोक युद्धपछिको अवधिमा देखियो। एटीवी क्रलर-ट्र्याक स्की गरे, तर (अप आधा एक वातावरण को आन्तरिक दबाव संग ठूलो व्यास पाङ्ग्रा) भन्दा होनहार मोडेल एटीवी pneumatics देखियो। यी पाङ्ग्रा मिसिन, को snowdrifts मा पर्दैन निर्धक्क marshland हटाउन धमिलो माटो soils मा सार्न, र अनुमति दिन्छ।
एक मोटरसाइकल, ट्रक देखि टायर धारण - पहिलो "घर" को एक Karakata भू-भाग वाहन भयो। देश को उत्तर मा कुशल कारीगरों द्वारा भेला घर ATVs, यो सजिलै हटाउन छ देखि र, जाडो माछा मार्ने लागि धेरै सहज थिए हिउँ drifts, र डूब छैन, बरफ-प्वाल मा उतरा। एक डोनट जस्तै बन्न गर्दैन मुद्रास्फीति समयमा क्यामेरा लागि क्रममा, यो प्रसंगवश, slippage रोकन, उत्कृष्ट lugs बनेको, बेल्ट, घेरिएको थियो। तथापि, यस्तो राम्ररी गर्न आवश्यक "चमत्कार" मा यात्रा गर्न खुसीले गदगद हुन। त्यसैले, धेरै अगाडी विकासक्रम कार र UAZ को शरीर को आधार मा जा।
खैर, अमेरिकी र क्यानाडा डिजाइनर पनि यस्तै विकास सञ्चालन गरेका छन्। उदाहरणका लागि, अमेरिकी कम्पनी "लकहीड" संग मूल इन्जिन संग pnevmokatah सबै-भू-भाग वाहन। 120 डिग्री कोण जडानहरू प्रयोग गरिएको थियो जो रेडियल हतियार फिक्सिंग को लागि तीन pnevmokata, - बरु यो मोडेल मा पाङ्ग्रा को।
संरचनात्मक मतभेद ATVs
दुई योजना6गर्दा एक्स6- - Wheeled घर एटीवी योजना4एक्स4मा एक पुल (तिपहिया साइकिलें) हुन सक्छ तीन। अमेरिकी र क्यानाडा बन्द-सडक वाहन मा सर्किट एक्स 8 8 सामना गर्यो।
एक डिजाइन सुविधाहरू फ्रेम जोडा छ pnevmokatov को। यो डिजाइन प्रत्येक पाङ्ग्रा आफ्नो स्थिति, छिमेकी फरक कोण बिना (सीमा भित्र) लिन अनुमति दिन्छ। यस्तो फ्रेम "ब्रेक" भनिन्छ र दुई कार्यहरु कार्य: यो throughput बढ्छ र overturning वा एटीवी टिप को likelihood कम गर्छ। यी फ्रेम कोण, च्यानल, विभिन्न आकार र पार खण्डहरू को पाइप देखि वेल्डेड गर्न सकिन्छ।
ATVs घर ठूलो र मध्यम आकार अक्सर व्यक्तिगत उद्देश्यका लागि pnevmokatah प्रयोग नियम, डिजेल इन्जिन र Otto रूपमा, सज्जित छन् - जंगल, माछा मार्ने र शिकार मा यात्रा।
घर एटीवी कम दबाव टायर लागि
के छ मात्र प्रविधी कारीगरों वा आत्म-सिकाउनुभयो सबै-भू-भाग वाहन सिर्जना गर्न प्रयोग गरिएको थियो: मोटरसाइकिल, नाउ, मोपेड, ट्रक, कार र पनि एक भाँचिएको ट्रेक्टर। सबैभन्दा नीच निर्माण हुन्छन् टिलर्स, घर फ्रेम र टायर कम दबाव tapered बेल्ट। तीन-wheeled मोडेल मा मुख्य drawback सबै-पाङ्ग्रा ड्राइव को कमी छ।
यस्तो भू-भाग वाहन सिर्जना जटिल भागहरु को एक अधिकता आवश्यकता छैन, यो वजन मा इकट्ठा गर्न छरितो र लाइटर छ, र मोटर किसान, mowers, वा मोटरसाइकल एकदम सस्ता ओटोमोबाइल को इन्जिन। शून्य बिना टैक्सी फ्रेम सान्त्वना को चालक स्तर देखि, त्यसपछि अक्सर आफ्नै पकाएको सानो घर कि त अछूता राख्नु वा हीटर राखे।
डिजाइन विचार को एक उत्कृष्ट उदाहरण इन्जिनियर ए सेन्ट-पीटर्सबर्ग Gargashyana को brainchild छ - भू-भाग वाहन "Cheburator"। आफ्नो पहिलो मोडेल "ओका", "Niva" को बक्स देखि इन्जिन डिजाइनर सुसज्जित र पुल uazovsky प्रयोग गरिन्छ। यस्तो संकर प्राइमर अप गति मा सार्न सक्छ 60 किलोमिटर र 300 किलो लोड सार्न। एसयूवी विभिन्न जटिलता को सडक मा परीक्षण र राम्रो परिणाम देखाए थियो।
जहाँ सुरु गर्न?
पहिलो चरण तपाईं आवश्यक र सबै-भू-भाग वाहन (कमला वा pnevmokatu) तपाईं रुचि कस्तो कस्तो निर्णय छ। उडान पछि रचनात्मक सोच सीमित गर्न सकिन्छ मात्र होइन विभिन्न तंत्र संग उपयुक्त भागहरु को उपस्थिति, तर अनुभव गरेर। भावी कार अवधारणा बनाउदा अर्को चरण पाठ्यक्रम, प्रयोग, क्षमता को अवस्था मा निर्णय र छ, क्षमता (धेरै मानिसहरू यो चल्न सक्छ कसरी)। थाह प्रारम्भिक आवश्यकताहरू, तपाईं चालक लागि सिट र यात्रु साथै कार्गो खाडी योजना, सबै घटक र सम्मेलन को लेआउट र नियुक्ति संग योजनाहरु सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ इन्टरनेट स्रोतहरू प्रयोग गर्ने मौका छ भने, तपाईंलाई सान्दर्भिक फोरम, जहाँ मास्टर DIY अपलोड फोटो, चार्ट, आफ्नो समस्या र अनुभव साझेदारी हेर्नुपर्छ।
इन्जिन कसरी चयन गर्ने?
हरेक मोटर एक घर एटीवी मा स्थापना को लागि उपयुक्त, आधारभूत आवश्यकता रूपमा - बाध्य ठंडा। मोटरसाइकल इन्जिन प्रयोग भने, यो एक स्थिर हावा प्रवाह प्रदान गर्दछ जो एक विशेष केसिङ स्थापना गर्न आवश्यक छ। दोश्रो, तपाईं आपतकालीन अवस्थामा को मामला मा एक शक्ति आरक्षित एक मोटर आवश्यक छ। वर्ष-राउन्ड सञ्चालन अब को पूरा चार स्ट्रोक इन्जिन, चरम चिसो सुरु गर्न सजिलो छन् जो।
हाम्रो बजार मा वृद्धि संग, पाठ्यक्रम मा चिनियाँ कला संख्या जापानी लाइसेन्स चिनियाँ उत्पादन टिलर्स देखि इन्जिन भयो। यी एकाइहरु, unpretentious विश्वसनीय र एक उचित मूल्य र शक्ति प्रशस्त छ।
एक घर बनाएको कहाँ दर्ता गर्ने?
घर वाहन एकरूप को प्रमाणपत्र को उपस्थिति मा यस्तो दर्ता इन्कार गर्ने अधिकार छैन भनेर Gostekhnadzor मा दर्ता गर्नुपर्छ।
निम्नानुसार प्रमाणीकरण प्रक्रिया हो। पहिलो चरण - घर बनाएको वाहन को निर्माण को लागि विनिर्देशों लेखन। दोस्रो - प्रमाणीकरण परीक्षण मा आविष्कारक (र उत्पादन) पठाउने स्थानीय प्रमाणीकरण शरीर, एक अपील। तेस्रो - परीक्षण पास र कुन Gostekhnadzor टाउको एकरूप को प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न।
Gostekhnadzor घर बनाएको दर्ता र आत्म-चालित मिसिन (PSM), यो ट्राफिक प्रहरी अधिकारीहरु मा दर्ता गरिनेछ जो मा एक प्रमाणपत्र जारी हुनुपर्छ। शुभकामना छ!
जर्मन कार ब्रान्ड - जर्मन मोटर वाहन उद्योग को अनुहार मा गुणवत्ता र विश्वसनीयता
टोयोटा Auris, समीक्षा र सुविधाहरू
को बम्पर मा एल्यूमीनियम जाल - किन आवश्यक छ?
अकुरा ZDX: जब सान्त्वना आदर्श शक्ति संग संयुक्त छ
एडी (Homeopathy): लागूपदार्थ। होम्योपैथिक उपचार जर्मन अभियान एडी
फोन फ्ल्यास, यो के हो?
पर्यावरण इन्जिनियर: भविष्यमा संरक्षकको
ट्रक र कार लागि टायर changers
राम्रो कुरा र एक सुन्दर उपहार - मसी गायब संग कलम!
Blanch के हो? हामी सिक्न!
प्राचीन ग्रीस को हीरो: नाम र साहसिक कार्य
दही र दूध देखि घरेलु पनिर। आफूलाई तयार
Aerated ठोस लागि बिछाउने जाल कसरी बनाउने
जसको झण्डा नीलो-पहेंलो-रातो छ?